साँचै भगवान रहिछन यी घरबेटी : जसले घरभाडाको १ पैसा नलिने ! सम्मानको लागि सेयर गरौ …..(भिडियो सहित) « Online Tv Nepal
साँचै भगवान रहिछन यी घरबेटी : जसले घरभाडाको १ पैसा नलिने ! सम्मानको लागि सेयर गरौ …..(भिडियो सहित)
Published : 21 March, 2020 5:53 pm
मकवानपुरको चित्लाङ स्थायी घर भएका हरिहर लामिछानेले काठमाडौंको कलंकीमा भएको घरको चार वटा कोठामा बस्ने चार परिवारलाई तीन महिनाको कोठा भाडा नलिने बताएका हुन् ।
देश संकटमा परेका बेला कोठा भाडामा बस्नेहरुलाई भाडामात्र छुट दिंदा पनि केही राहत होस् भनेर परिवारसँगको सल्लाह अनुसार भाडा नलिने निर्णय गरेको लामिछानेले केन्द्रबिन्दुलाई बताए । उनले आफु पनि भाडामा बसेर दु:ख भोगेर आएको बताउदै भने- ‘दुखको बेलामा मानवीय कर्तव्य पुरा गर्ने खोजेको मात्र हो ।
मैले कुनै प्रचारको लागि फेसबुकमा स्टाटस लेखेको होइन । छुट दिएर नै लेखेको हुँ ।’ उनले थपे, “मैले लेखेपछि सबैले सेयर गरिदिए । यस्तो सन्त्रास फैलिएको बेलामा यो मानवीयताको लागि मात्र गरेको हो ।” उनले भने । उनले सहजरूपमा मास्क उपलब्ध भए ५ हजार थान मास्क बाड्ने योजना रहेको समेत बताए ।